Wasaarada Beeraha Hirshabelle oo qalab loogaga hortago Ayaxa u qeybisay beeralayda Mahaday - Home somali news leader
Home NEWS Wasaarada Beeraha Hirshabelle oo qalab loogaga hortago Ayaxa u qeybisay beeralayda Mahaday
Wasaarada Beeraha Hirshabelle oo qalab loogaga hortago Ayaxa u qeybisay beeralayda Mahaday
Wasaarada Beeraha Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa maanta u qeybisay qalab lagula dagaalamo ayaxa qaar ka mid ah beeralayda degmada Mahaday ee gobolka Sh/dhexe.
Qalabkan ayaa kahor inta aan loo qeybin beeralaydan waxaa la siiyay tababar ku saabsan la dagaalanka Ayaxa iyadoo tababarka ay goobjoog ka ahaayen mas’uuliyiin uu ka mid ahaa Sii hayaha Wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim ”daqare”,guddoomiyaha degmada Mahaday Axmed Xuseen Afrax iyo saraakiil ka tirsan wasaarada beeraha Hirshabelle iyo maamulka degmada Mahaday.
“Tababarkan waxa uu ahaa mid aan ka faa’ideysanay sida loo buufiyo ayaxa dhibaatada ku haya deegaanadeedan.”ayuu yiri Xasan Calasow Cumar oo ka mid ahaa beeralaydii tababarka la siiyay.
Munaasabadan tababarka ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay guddoomiyaha degmada Mahaday Axmed Xuseen Afrax isagoo u mahadceliyay Wasaarada Beeraha iyo Waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle kaalmada ay ka geysatay sidii loo heli lahaa qalab iyo sun lagula dagaalamo ayaxa.
Gabagabadii munaasabadan oo ka dhacday magaalada Jowhar ayaa waxaa ka hadlay Wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim ”daqare” waxana uu sheegay in koox ka tirsan beeralayda Mahaday loo tababaro sidii lagula dagaalami lahaa ayaxa.
“Qalabkan waxa uu yahay mid ay wasaarada beeraha dowlada federalka ay noogu deeqday,degmada Mahadayna waa degmadi ugu dambeysay ee gobolka Sh/dhexe qalabkan lagu wareejiyo loona tababaro.”ayuu yiri wasiirka beeraha Daqare.
Wasiirka ayaa kula dardaarmay kooxdan la tababaray inay ku dadaalaan sidii ay aqoontii ay ka heleen tababarka u dabaqi lahaayeen isla markaana ay sunta uga ilaalin lahaayeen dadka iyo xoolaha.
Wasaarada beeraha iyo waraabka Hirshabelle ayaa hore qalabka iyo sumaha lagula dagaalamo ayax u qeybisay degmooyinka ay ka kooban tahay dowlad goboleedka Hirshabelle.
tababar loo xirey koox la dagalanta AYAXA
Previous articleDagaal culus oo ka socda xaafado ka tirsan degmada Kaaraan
Next articleTaliyaasha Ciidamada Booliska iyo Milatariga oo gaaray magaalada Gaalkacyo